प्रकाश सपुतले ‘मैले यसरी जितेँ कोरोना’ भन्दै गरे सबैलाई यस्तो आग्रह, तुरुन्तै हेर्नुहोस् ! – Complete Nepali News Portal
प्रकाश सपुतले ‘मैले यसरी जितेँ कोरोना’ भन्दै गरे सबैलाई यस्तो आग्रह, तुरुन्तै हेर्नुहोस् !
काठमाडौं । गायक प्रकाश सपूतले सबैको शुभेच्छा र आफ्नो उच्च आत्मविश्वासले कोरोना जितेको बताएका छन्। सपूत मंगलवार कोरोना मुक्त भएका हुन्। उनले आफू र भाई देवेन्द्र बल्लु कोरोना मुक्त भएको सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका हुन्।
साथै कोरोना जित्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बाँड्न चाहने समेत उनले बताएका छन्। उनको यहीँ वैश्वाख १७ गते कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो। कोरोना भएपछि उनी होम आइसोलेसनमा बसेका थिए। त्यसपछि उनका भाइलाई पनि कोरोना पृष्टि भएको थियो। साथै अहिले प्रकाशकी आमा पनि कोरोना संक्रमित छिन्।
आमा बलियो आत्मविश्वासका साथ कोरोनासंग जुधिरहेको र छिट्टै कोरोनालाई जित्ने विश्वास लिएको प्रकाशले बताएका छन्। यस्तो बेला आफू सुरक्षित र सकरात्मक भएर सतर्कता अपनाएर संक्रमितलाई हौसला र आत्मबल प्रदान गर्न समेत उनले आग्रह गरेका छन्।
नाता र भावना ले जोडिएका आफन्त ईस्टमित्र एंव कलाकारीता मार्फत जोडिनुभएका संसारभरिका नेपाली शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरुको शुभेच्छा र हाम्रो उच्च आत्मबलले कोराना पराजित भएको छ । भाई देबेन्द्र र म निको भएका छौ । विभिन्न माध्यमबाट शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुने तपाई सबै सबै लाई धेरै धेरै धन्यबाद कोरोना जित्न सकिन्छ । यो आत्मविश्वास बाढ्न चाहन्छौ । तर आमा पनी संक्रमित हुनुहुन्छ । बलियो आत्मविश्वासका साथ जुधिरहनुभएको छ । आमाले पनी कोरोना जित्नुहुनेछ । आज आमाको मुख हेर्ने दिन यसरी दुरी राखेरै भए पनी हामीले आमालाई माया र कृतज्ञ प्रकट गर्यौ । भावनात्मक हिसाबले यो तस्विर निकै पिडादायिक छ । सतर्कता अपनाएर संक्रमितलाई हौसला र आत्मबल प्रदान गरौ । सुरक्षित र सकरात्मक रहौ